Amisom oo nin shacab ku dilay Wadada maka Al mukarama iyo shacab ka banaanbaxay dilkaas +Sawiro « AYAAMO TV
Amisom oo nin shacab ku dilay Wadada maka Al mukarama iyo shacab ka banaanbaxay dilkaas +Sawiro
808 Views Date January 28th, 2014 time 12:11 pm
Shacab careysan ayaa wadada Maka Al-Mukarama ka jaray dhamaan gaadiidka, iyagoo ka gadoodsan dil saaka gaadiid ay wateen ciidamada AMISOM ugu geysteen agagaarka Tre-biyaano nin Taksiile ah.
Dadweynahan oo wejiyadooda laga dhadhansan karo caro ay ka qaadeen falkan ay ku kaceen ciidamada AMISOM ayaa wadada ku gooyey dhagxaan, iyagoo sheegaya iney halkaas ku sugayaan ciidamada AMISOM.
Ciidamo ka tirsan dowlada oo isugu jira Boolis iyo nabad sugid ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa halkaas la soo dhoobay sida ay wararku nagu soo gaarayaan si ay uga hor tagaan suuragalnimada rabshado hallkaas ka dhaca.
Gaadiidka ay wateen ciidamada AMISOM ayaa saaka ninka taksiilaha ah ku jiiray wadada Maka Al-Mukarama gaar ahaan ka soo horjeedka isbitaalka Daarul-shifaa iyagoo ku socda seed qaldan, umana joogsanin ninka ay jiiren oo oo isla goobta ku geeriyooday.
Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya saldhiga booliska degmada Waaberi ayaa sheegaya in goor dhow halkaas la keenay gaarigii AMISOM ee jiiray ninka taksiilaha ah, waxaana sidoo kale gaaray saldhiga saraakiil iyo maasuuliyin ka tirsan dowlada Somalia.
Xaas iyo caruur uu ka geeriyooday taksiilaha ay dileen ciidamada AMISOM ayaa iyana la soo sheegayaa iney hadda gaareen saldhiga booliska Waaberi iyagoo barooranaya kana tiiraanyeysan falka lagu dilay aabaha qoyskooda oo ku mashquulsanaa raadinta nolol maalmeedkooda. Xiisad xoogan ayaa ka taagan weli wadada Maka Mukarama oo ah wado ay inta badan isticmaalaan ciidamada AMISOM ee isaga gooshaya madaxtooyada iyo garoonka dayuuradaha Muqdisho.